रोज्नुहोस्घुसाउनुहोस् - फाँटहरू - अन्य - कार्यहरू tab
यदि निश्चित शर्त पुगेमा पाठ घुसाउछ। उदाहरणका लागि,शर्त बाकस भित्र "sun eq 1" प्रविष्टी गर्नुहोस्, र त्यसपछी त्यसपछी बाकसमा "sun" चाही "1" सँग बरावर भएको बेलामा तपाईँंले घुसाउन्न चाहेको प प्रबिष्टी गर्नुहोस्। यदि तपाईँंले चाहनुहुन्छ भने,अन्यथा बाकसमा यो शर्त नमिल्दा प्रदर्शन गर्न चाहेको पाठ पनि प्रविष्टी गर्न सक्नुहुन्छ। चल "sun" परिभाषित गर्नलाई,चलहरू ट्याब क्लिक गर्नुहोस्, "Set variable" चयन गर्नुहोस्,नाम बाकसमा "sun" टाइप गर्नुहोस् र यसको मानलाई मान बाकसमा टाइप गर्नुहोस्।ाठ
तपाईँंले कागजातमा यसलाई क्लिक गर्दा एउटा पाठ फाँट घुसाउछ । तपाईँंले त्यसपछी प्रदर्शन गरिएको पाठ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
म्याक्रो कार्यान्वयन गर्नुहोस्
तपाईँंले कागजात भित्र फाँटलाई क्लिक गर्दा एउटा म्याक्रो चलाउने एउटा पाठ फाँट घुसाउछ। फाँटमा एउटा म्याक्रो मानाङ्कन गर्नलाई, म्याक्रो बटन क्लिक गर्नुहोस्।
कागजात भित्र एउटा प्लेसहोल्डर घुसाउछ, उदाहरणका लागि , ग्राफिक्सका लागि । जब तपाईँंले कागजात भित्र एउटा प्लेसहोल्डर क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाईँं हराईरहेको वस्तु घुसाउनलाई प्रोत्साहित हुनुहुन्छ।
६ क्यारेक्टर सम्म संयोजन गर्दछ, ताकी तिनीहरूले एउटा एकल क्यारेक्टरको रूपमा व्याबहार गरुन। यो गुण एसियाली फन्टहरू समर्थन गरिएमा मात्र उपलब्ध हुन्छ।
कार्य फाँटहरूका लागि, ढाँचा फाँट टाइप प्लेसहोल्डरको फाँटहरूका लागि मात्र प्रयोग हुन्छ। यहाँ, ढाँचाले प्लेसहोडर कस्का लागि हो भन्ने वस्तु निर्धारण गर्दछ।
एउटा शर्त का लागि लिङ्क भएको फाँटहरूका लागि, मापदण्ड यहाँ प्रविष्टी गर्नुहोस्।
तपाईँंले "databasename.tablename.fieldname" प्रयोग गरेर डाटाबेसलाई त्यसपछी रअन्यथा बाकसहरू भित्र घुसाउन पनि सक्नुहुन्छ।
यदि तालिका वा फाँट नाम डाटाबेसमा घुसेन भने, केही पनि घुस्दैन.
यदि तपाईँंले क्वोटहरू घुसाउनु "databasename.tablename.fieldname" मा घुसाउनु भयो भने, अभिब्यक्ति पाठको रूपमा घुस्दछ.
फाँट क्लिक गरेको बेला तपाईँंले चालु गर्न चाहनु भएको म्याक्रो चयन गर्नुहोस्.
चयन गरेको म्याक्रोको नाम प्रदर्शन गर्नुहोस्.
placeholder फाँटमा देखाउन चाहनु भएको पाठ टाइप गर्नुहोस्.
अवस्था भेटेको बेला पाठ टाइप गर्नुहोस् जुन तपाईँं लुकाउन चाहनुहुन्थ्यो.
तपाईँंले संयोजन गर्न चाहेको क्यारेक्टरहरू प्रविष्टी गर्नुहोस्। तपाईँंले अधिकतम ६ क्यारेक्टर संयोजन गर्न सक्नुहुन्छ। यो विकल्प क्यारेकटरहरू संयोजन गर्नुहोस् फाँट प्रकारका लागि मात्र उपलब्ध हुन्छ।
चयन गरिएको फाँटका लागि मान प्रविष्ट गराउनुहोस्.
Opens the म्याक्रो चयनकर्ता, जहाँ तपाईँले कागजातमा चयन गरिएको फाँट क्लिक गरेको बेलामा चल्ने म्याक्रो रोज्न सक्नुहुन्छ । यो बटन केबल "Execute macro" प्रकार्य फाँटका लागि मात्र उपलब्ध हुन्छ ।
तलका नियन्त्रणहरू आगत सूची फाँटहरूको रूपमा प्रदर्शित हुन्छ:
नयाँ वस्तु प्रविष्ट गराउनुहोस्.
वस्तु सूचीमा थप गर्नुहोस्.
वस्तुहरू सूची गर्नुहोस्. topmost वस्तु कागजातमा देखाइएको छ.
सूचीबाट चयन गरेको वस्तु हटाउनुहोस्.
चयन गरेको वस्तु सूचीको माथि सार्नुहोस्.
चयन गरेको वस्तु सूचीको तल सार्नुहोस्.
अनौंठो नाम आगत सूचीका लागि प्रविष्ट गराउनुहोस्.
वस्तु चयन गर्नुहोस्
संवाद देखाइन्छ जब तपाईँंले कागजातमा आगत सूची फाँट क्लिक गर्नुहुन्छ.
Title is: कार्यहरू